BBC Somali - Warar - Qarax lala beegsaday ciidan Itoobiyaan ah
Qarax lala beegsaday ciidan Itoobiyaan ah
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 1 Febraayo, 2012, 15:38 GMT 18:38 SGA
Ciidan Itoobiyaan ah ayaa qarax lagula beegsaday Beled Weyne
Magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee dalka Somalia, kolonyo ciidamo Ethiopian ah oo dhex marayay magaalada ayaa waxaa lala beegsadey qarax miino.
Qaraxan ayaa ahaa miino meelaha fog laga hago oo ciidamadan lala beegsadey xilli ay marayeen nawaaxiga buundada koowaad ee magaalada.
Wararku waxay sheegayaan in qaraxa kadib ay ciidamada Ethiopia rasaas fureen, halkaasina ay ka dhacdey dhimashada ilaa dhowr qof oo rayid ah.
Xarakada Al-Shabab ayaa sheegtey inay fulisey weerarkaasi, isla markaana ay dishey lix askari oo ka tirsan ciidamada Ethiopia.
Ciidamada Itoobiya ayaa dabayaqadii bishii hore ee December qabsaday magaalada Beled Weyne, qof rayid oo diiday in magaciisa la sheegana waxaa uu BBC u sheegay in xilliyada subaxdii iyo galabti wadada weyn ee magaalada isku xirta la xiro. Wadadaasi ayaa ay xilliyadaasi adeegsadaan ciidanka Itobiyaanka oo waxyaabaha aas aasiga ka soo qaata magaalada.